Wild Cat Canyon | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! Wild Cat Canyon | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
Wild Cat Canyon bụ a 5 ukwu online ohere mpere merie ezigbo ego egwuregwu na 25 paylines na i nwere ike ịgbanwe ka kwa gị mkpa. Isiokwu dabeere na a ọhịa cat njikere ichu nta ya na-eri anụ na a gbahapụrụ kaniyon n'okpuru eluigwe gbachapụrụ agbachapụ na-akpụ akpụ na ígwé ojii. The serene ikuku a mobile oghere awade a obi dajụọ na ụda nke iti mkpu vultures ma na-afụ ifufe na-eme ka a ị na-ara ka egwuregwu. A Spanish guitar music na-egwuri mgbe ohere mpere akpa ogho. Ịkụ nzọ ego amalite na dị ka ala dị £ 0.01 maka otu payline na a max nke £ 250 kwa atụ ogho na niile 25 paylines.
Banyere Mmepụta nke Wild Cat Canyon:
a online ohere mpere merie ezigbo ego game e mepụtara site NextGen, ọhụrụ online Ịgba Cha Cha ngwọta na-eweta na a dịgasị iche iche nke oghere na cha cha egwuregwu ya n'aka. Ha mepụtara ụfọdụ egwuregwu na ihe ndị kasị ihe na echepụtakarị themes na meriwo a ọtụtụ nde obi.
na nke a online ohere mpere merie ezigbo ego game e nwere ebe anọ n'elu uru isi na akara na ha na udele, anụmanụ na anya dị ka a ọkara ụzọ na-agba ọsọ na ọkara ewu, cacti na a Californian agwọ. Udele na-akwụ ndị kasị elu n'osisi 500 mgbe ise n'ime ha adaa gafee etiti ahiri. Ebre kaadị nnọchianya nke A, K, Q, J, 10 & 9 na-ala na-akwụ ụgwọ ihe nnọchianya na AK na 250, QJ na 150 na 9-10 na 100 ugboro n'osisi. The bonus nnọchianya nke egwuregwu na-anụ cat onwe ya tinyere ya poo ebipụta.
Wild Njirimara: The ọhịa na akara ke a mobile oghere egwuregwu na-anọchi anya ndị wildcat na ọ na-egosi na 2nd & 4nke ukwu. Ọ na-ekpuchi ihe niile na-akara na egwuregwu na ya mere nwere ike dịkwuo gị ohere ọzọ na-emeri ihe n'ịgwa. Ọ na-adịghị, Otú ọ dị, ekpuchi maka ikposa feature nke egwuregwu.
Gbasaanụ Free spins: The ubọk ebipụta bụ ikposa atụmatụ a online ohere mpere merie ezigbo ego egwuregwu na na atọ ma ọ bụ karịa na akara anya i nwere ike ịkpalite free egwuregwu. Ebe ị ga-ahọrọ na ọnụ ọgụgụ nke free spins n'etiti 5, 10 & 15. 5 spins enye 10 ugboro multiplier na-enweta nkwanye, 10 spins na 3 ugboro na 15 spins na 3 ugboro.
Summary: Dị iche iche na-adọrọ mmasị bonus atụmatụ na multipliers, ị nwere ike mfe na-atụ anya iji merie nnukwu ego site na njedebe nke ụbọchị na a online ohere mpere merie ezigbo ego game.